HALKAAN KA AKHRISO WARARKA WARGERYSKA MOGTIMES EE DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH KHAMIIS 19-KA MAY 2022
Thursday May 19, 2022 - 08:35:08 in Wararka by Mogadishu Times
RA’IISAL WASAARE ROOBLE OO LA KULMAY GUDDIGA DOORASHADA MADAXWEYNAHA
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay Xafiiskiisa M/Muqdisho ku qaabilay Guddiga Doorashada Madaxweynaha, ee Axaddii soo geba-gabeeyay doorashada xilka madaxtinimada ee dalka.
R/ Wasaaraha ayaa Xubnaha Guddiga Doorashada uga mahad celiyay, sida hufan ay u maamuleen doorashada lagu soo doortay Madaxweynaha 10aad ee dalka.
"R/Wasaare Rooble ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay Guddiga Baarlamaanka ee Doorashada Madaxwaynaha, isaga oo uga mahad celiyay, sidii wanaagsaney ee ay u maamuleen Doorashada Madaxwaynaha 10aad ee JFS.” Ayaa lagu sheegay bogga G/Aqalka Sare ee Facebook.
Doorashadan ayaa ahayd mid si weyn isha loogu hayay, ka dib dib u dhac hareeyay muddo15toban bilood ah.
Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay Madaxweynaha xigga ee dalka ayay tahay in muddo bil ah uu ku soo magacaabo R/ Wasaaarih iisa, oo ka bilaaneysa xilliga la doortay
Madaxweyne Xasan oo Shalay shir guddoomi yey kulan muhiim ah
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Md. Xasan Sh. Maxamuud ayaa Shalay M/Muqdisho ku shir-guddoomiyay Shir muhiim ah oo looga hadlayay abaaraha ka taagan dalka.
Shirkaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Shacab ka Baarlamaanka Federaalka Sooma aliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo qaar ka mid ah ururada Bulashada Rayidka.
Waxaa looga hadlay xaalada abaaraha, taas oo dalka saameyn ku reebtay dadka iyo duunyada iyo weliba sidii ca awimo loogu fidin lahaa dadkeena ay saameysay.
Kulanka ayaa imaanaya xilli ay dalka ka jirto abaar aad u daran, ayada oo la soo warinayo in gobalada qaar ay dad ka u dhinteen biyo la’aan, halka qaarkood ay ka baro-kac eyn deeganadii ay ku sugaanaayeen.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa hor-yaalo caqabado badan oo ay kamid yihiin wax ka qabash ada Abaaraha soo noq-noqda, ayada oo xiligaan laga sugaya sida ay dowladdiisa u maareyn laheed abaarta ba ahsan ee dalka ka jirta.
Guddoomiyaha G/Banaadir oo xarigga ka jaray dhismaha Gudiga Gaadiidka Bajaajka G/Banaadir
Guddoomiyaha G/Banaadir ahna Duqa M/Muqdisho Md. Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa xarigga ka jaray dhismaha cusub ee Gudiga Gaa diidka ee Bajaajka G/Banaadir.
Xarig-jarka ka dib ayaa Duqa M/Muq disho Md.Cumar Filish waxa uu kulan gaar ah la qaatay maamulka Gudiga Gaadiidka Bajaajka isagoo ka dhageestay warbixina kala duwan oo quseeya xaaladaha ay Bajaajka ku shaqeeyaan & sida ugu haboon ee loo hagaajin karo isticmaalka Wadd ooyinka maadaama tira ahaan ay yihiin kuwa aad u badan
Swan Iyo Xasan Sheekh Oo Ka Wada Hadlay Sii Wadista Taageerada Qaramada Midoobe.
Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud ayaa Shalay kulan gaar ah la qaatay wakiilka Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha Sooma aliya James Swana.
Kulanka oo intiisa badan is xog wareysi u badnaa ayaa sidoo kale diirada lagu saaray sida ugu wanaagsan ee Qaramada Midoobay ay u sii wadi karto taageerada ay siiso Soomaaliya iyo dadkeeda
"Wakiilka Gaarka ah ee Q/ Midoobay Mr.James Swan waxa uu ku faraxsan yahay inuu Shalay Muqdisho kula kulmo oo uu si shakhsi ah ugu hambalyeeyo Madaxweynaha dhowaan la doortay ee Soomaaliya Xasan Sh.Maxamuud, isagoo ka xog wareystay arrimaha mudn Shalay u leh maamulkiisa, waxa ay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee Q/Midoobay ay u sii wadi karto taagee rada ay siiso Soomaaliya iyo dadkeeda” ayaa lagu yiri war ka ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobe.
Madaxweyne Xasan oo 7aadka soo socda xafiiska la wa reegayo ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu waday kul amo kala duwan uu la yeelanayay dhinacyada Soomaalida iyo beesha caalamka, iyadoo kulamadaas intooda badan diirada lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka do wladda iyo beesha caalamka oo hoos u dhacay Shantii sa no uu xafiiska joogay Farmaajo.
Mr.swan iyo xasan sheekh oo ka wada hadlay sii wadis ta taageerada qaramada midoobe.swan iyo xasan sheekh oo ka wada hadlay sii wadista taageerada Q/Midoobe.
Soomaaliya iyo Masar oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Md. Sh. Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo Shalay hoygiisa ku qaabilay safiirka dalka Masar Amb. Mohamed El Baz oo u yimid sala an iyo hambalyo uu ka siday Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka Masar Md. Dr. Ali Abdel-Aal. Wuxuu safiirku bogaadi yay dadaaladii Guddoomiyaha G/Shacabka ee ku aaddanaa dhamaystirka doorashada ee ahayd mid xur iyo xalaal ah. G/Golaha Sh/BJFS Md. Sh. Aadan Madoobe ayaa ka gu ddoomay hambalyada uu danjiraha soo gaarsiiyay waxaa na uu sheegay in 2da dowladood ay ka wada shaqeyn do onaan horumarada kala duwan ee 2da dal
ROOBLE: Madaxweyne Xasan waxaan leeyahay Milkiile ka ilaali dalkan
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Md.Maxamed Xuseen Rooble oo wareysi xa saasi ah siiyey VOA ayaa ka hadlay xaaladda dalka, doora shooyinkii soo dhammaaday iyo dhismaha dowladda cusub. Rooble ayaa sheegay in waqti adag, ka dib uu ku guuleystay inuu qab to doorasho wadar oggol ah, isla-mark aana uu ka soo ma ray marxalado kala duwan.R/ wasaara ha ayaa farriin la xiriirta dhismaha dowl adda cusub u diray Ma daxweynaha mar 2aad loo doortay Xasan Sh oo maalm aha soo socda xilka la wareegi doono.
Md.Maxamed Xuseen Rooble ayaa kula taliyey Madax weyne Xasan inuu dalka ka ilaaliyo Milkiile, isla-markaana uu isagu qaato go’aannada iyo tallaabooyinka la qaadayo.
"Waxaan kula talinayaa oo kale oo shacabka ay hadda je cel yihiin inaan Madaxweyne Xasan Sh.kula taliyo waxay ta hay Milkiile ka ilaali dalkan,’ ayuu yiri R/ wasaare Rooble.
Sidoo kale wuxuu sii raaciyey "Adaa mas’uul ka ah waa ku sheegayaa mar 1aad, mar 2aad, mar 3aad Miilkiile dalkaan iskama lahan Nin ku keensaday ma jiro Soomaali adiga ay ey ku dooratay,”.
"Walaalow Xasanow waddooyinkii ay Soomaaliya ku duntay waxaa ka mid ah Milikiile go’aanka adiga qaado iyo R/wasaar ahaaga iyo inta mas’uuliyadda markaas kula heyso cid kale haku aaminin,” ayuu markale wareysigan ku yiri Ra’iisul wasaare Rooble.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo la xasuusto dag aalkii siyaasadeed oo uu R/wasaaruhu la galay madaxwe ynihii hore ee dalka, Farmaajo iyo la-taliyihiisa Fahad Yaa siin La taliihiisa amniga qaran ka Fahad Yaasiin oo loogu yeeraayey 5 sano ee lasoo dhaafay Miilkiilaha dow ladda
Axmed Madoobe oo sanad ka dib Shalay tegay Villa Somalia
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Shalay sanad kadib, gudaha u gal ay xarunta Villa Soomaaliya, isaga oo kulan gaar ah la yeeshay R/wasaa raha XFS,Md.Maxa med Xuseen Rooble.
Md.Maxamed Ibraahim Macallimuu oo qoraal kooban ka soo saaray booqasha da Axmed Madoo be ee Madaxtooyada ayaa yiri "Madaxweyne Axmed Ma doobe ayaa Shalay soo gaaray Madaxtooyada Soomaaliya oo ay ugu dambeysay dhamaadka September 2020 markii hishiiskiisa 17 September la gudagaliyay dhaqan galkiisa. Waxaa xafiisk iisa ku qaabilay RW Rooble,”
Md.Rooble & Axmed Madobe ayaa kul ankooda oo saacado badan qaatay uga hadlay xaaladda dalka iyo sidoo kale do orashadii soo dhammaatay.
"Waxa ay ka wada hadleen gebagebada howshii doora shada dalka ee guusha ku soo dhammaatay,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska R/wasaaraha somaaliya.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo sidoo kale kulanka ka hadlay ayaa Rooble uga mahad-celiyay sidii uu hoggaamiy ay howshii doorashada dalka iyo dhabar adeygii uu muuji yay si uu uga miro dhaliyo doorashadii dalka oo ku soo dhammaaatay si nabad ah.
Kulankan ayaa u muuqday mid dabaal-deg ah iyo sidoo kale is marxabeyn, ka dib guushii doorashada Soomaaliya iyo go’aankii laga gaaray doodii xildhibaanada gobolka Ge do, maadaama guddoomiyaha Baarlamaanka oo meel ma riyey xubnihii ka soo baxay Ceelwaaq.
Dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa maalmihii u dambe eyey ka waday Muqdisho abaabul ku aaddan qorshe uu ku wajahayo gobolka Gedo oo gacantiisa ka maqan, wuxuuna doonayaa, isaga oo kaashanaya saaxibadiisa in dowladda cusub ay ciidamada kasoo saarto gobolkaasi.
Soomaaliya ayaa haatan ka gudubtay xaaladdii adkeyd & is mariwaagii taagnaa, ka dib isbedalka ku yimid hoggaan ka Villa Somalia oo mar 2aad loo doortay Xasan Sh..Max amuud
Ra’iisul Wasaare Rooble Oo Kulan La Qaatay Madax da Midowga Afrika Iyo Taliska ATMIS
Ra’iisulwasaaraha X/F/Soomaaliye ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo Shalay la kulmay ku-xigee nka Howgalka M/Afrika ee ATMIS Fiona Lortan iyo Taliska Ciidam mada M/Afri ka ee ATMIS. R/w asaaraha ayaa madaxda & talis ka ATMIS uga mahad cel iyay kaalintii ay ka qaateen sugidda amniga doora shoo yinkii dalka ka qabsoomay iyowada shaqeyntoodii, waxa uuna ku booriyay in ay sii dardar geliyaan howlaha nabad ilaalinta ee ay dalka u joogaan. Ku-xigeenka Howgalka Midowga Afrika ee ATMIS Fiona Lortan &Taliska Ciidammada M/Afrika ee AT MIS ayaa dhankooda Taliska Ciidanka Booliska DFS uga mahad celiyay sidii qeyb uga qaateen sugida amniga.
Ciidanka ATMIS ayaa sugayay amniga doorashadii Ma daxweynaha DFS oo 15-kii May 2022 ka qabsoontay M/M uqdisho gaar ahaan Teendhada Afisyooni ee xeyndaabka Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
GALMUDUG OO SHAACISAY WAXA LAGU SAMEYN DOO NO HADDII LASOO QABTO SHEEKH SHAAKIR
Maamul Goboleedka Galmudug ayaa si rasmi ah u shaa ciyey tallaabada laga qaadi doono haddii gacanta lagu soo dhigo saraakiisha ururka Ahlu-Sunna Waljamaaca oo uu ku jiro hoggaamiyahooda Sh.Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Taliska booliska Galmudug ayaa Dorraad soo saaray liiska 36 qof oo lagu raad joogo, kuwa as oo loo heysto hurinta da gaalkii ay Ahlu-Sunna ku soo qaaday Dhu usamareeb, wa xaana ka mid ah Sh/ Sha akir Cali Xasan, Tal iyihii aas-aasay cii danka Ahlu-Sunna Jen. C/hi Xaaji Diiriye (Han bacoor), guddoo miyihii hore ee Dhu usam areeb C/hi Been taa, Taliyihii hore ee NISA – Galmudug, G/ Sare Ca/i Cabdi Raage & saraakiil kale.
Taliyaha Booliska Galmudug G/le Sare Khaliif Cabdulle Maalin ayaa sheegay in haddii la soo xiro saraakiisha Ahlu Sunna & Sh. Shaakir ay caddaaladda horkeeni doonaan, si loo maxkamadeeyo.
Taliya ayaa xusay in saraakiisha Ahlu Sunna iyo hogga amiyahooda Sh. Shaakir ay dambiyo ka galeen dadka reer Galmudug, sidaasna ay booliska u amreen in la qabto meel kasta oo lagu arko.
Booliska ayaa rumeysan in xubnaha la raadinayo qaar kood ay u baxsadeen maamulada kale ee dariska la ah, halka kuwa kale ay ku dhuumaaleysanayaan miyiga maga alooyinka Dhuusamreeb, Guriceel iyo Matabaan.
"Hadda waxay joogaan Matabaan iyo Guriceel dhexdooda, waxaana ku raad joognaa firxadkoodii, waxaana kaga daba tageynaa meel alaale meesha ay galaan maadama laga harsan waayay ayna dadka Galmudug u diideen amni,” ay uu yiri gaashaanle sare Khaliif Cabdulle oo wareysi siiyey Idaacadda
Taliyaha ayaa ugu dambeyn sheegay inuu Dadka reer Galmudug u ballan qaadayo in kooxdaan iyo hoggaamiya hooda ay mari doonaan Cadaaladda waqti kasta oo gacan ta lagu soo dhigo sida uu hadalka u dhigay.
Ciidamo taabacsan Sheekh Shaakir kuna hubeysan hub ka noocyadiisa kala duwan ayaa Jimcihii lasoo dhaafay we erar kusoo qaaday Caasimadda Galmudug ee D/mareeb.
Dagaalkii Dhuusamareeb ku dhex maray Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa sababay dhimashada dad Shacab ah iyo ciidamo ka kala tirsan labada dhinac, waxaana maamul ka Galmudug u suurta gashay inay Magaalada ka saaraan kooxihii weerarka kusoo qaaday.
Xasan Sheekh oo shaaciyay qorshihiisa 100-ka maalmood ee ugu horreeya
Madaxweynaha cusub ee Dalka Soomaaliya Md. Xasan Sh. Maxamuud ayaa markii u horeysay shaaciyay qorshih iisa 100-ka Maalmood ee u horeysa iyo howlaha hortabinta leh ee dowladiisu qabaneyso.
Madaxweyne Xasan Sh.Maxamuud oo wareysi gaar ah siiyay idaacada VOA-da ayaa sheegay in uu dalka ka dhaqan-geli doono tallaabooyin dhanka amniga ah, xas ilooni siyaasadeed iyo dib u soo kabida dhaqaalaha dalka.
"Waxaa rabna 100-ka Maalmood gudahood in aan dib u eegis ku sameynay hay’addaha amniga, sharciyadooda oo aad u gaboobay.Waxaa rabna in aan heshiis guud oo dowlada & D/Goboleedyada dhex mara oo lagu Federaal eynayo arrimaha muhiimka ah,” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu sheegay in arrimaha amniga ay mu hiimad gaar ah siin doonaan, isla markaana ay hirgelin do onaan qorshayaal kor loogu qaadayo amniga dalka, gaar ahaan midda caasimada.
"Magaalada in aan xaqiijino ayaa rabna inay amni noqoto, si aan u xaqiijino amniga Muqdisho dhexdeeda Muqdisho kuma xaqiijin karno 2da Shabeelle & banaankana waa ka xaqiijineyna. Arrimaha amniga oo dhan cidkasta oo naga saacideysana waa soo dhoweynaynaa.”
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay inay sidoo kale dib u eegis ku sameyn doonaan qorshe looga gudbayo nidaam ka doorashada dadban oo aan dhaqan-gelin, si looga gud bo doorashada dadban ee khilaafka badan.
"Dadka Soomaaliyeed ma jeclin in sida ay wax u dhac een ee nidaamka doorashada dadban ee khilaafka badan inuu ku soo noqdo. Marka uu dhamaanayao muddo xileed
keena 2026, nidaam dadku isku raacsan yihiin oo ka duw
an doorashada dadban ayaa la iman doonaa.”
Muxuu Muuse Biixi ka yiri doorashadii Xasan?
Madaxweynaha Somaliland, Md.Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeediyey xuska 18-ka May oo ah markii ay ku dho waaqeen inay ka go’een Soomaaliya inteeda kale ayaa ka had lay arrimo dhowor ah & doora shadii Xasan Sh.
Md.Biixi ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday qaddiyadda Somaliland, wu xuuna ku eedeeyey Soomaaliya inay weli diidan tahay inay helaan aqoonsi caalami ah.
Madaxweynaha ayaa xusay Somaaliya ay aaminsa ta hay in Somaliland ay weli tahay gobol iyaga ka mid ah, sida uu ku dooday. "31 sanadood oo aynu kala maqneyn 1991-kii illaa Shalay walaaladeyn kama aynaan helin wax garo wshiyo ah ka ma aynaan heli wax gar qaadasho ah waxay isku raacsan yihiin dhammaantood inaanu nahay gobol ka mid ah oo aan xor sheegan karin,” ayuu yiri Biixi.
Dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday doorashadii Madax weynaha ee dhowaan ka dhacday Teendhada Afisyoo ne, isla-markaana mar labaad xilka loogu doortay Xasan Sheekh.
Md.Muuse Biixi ayaa shaaca ka qaaday inuu soo dhowe ynayo inay si nabad ku dhacday doorashadaasi, isla-ma rkaana ay talada isku dhiibeen labada Madaxweyne.
Sidoo kale wuxuu ugu duceeyey Madaxweynaha cusub inuu Alle u fududeeyo mas’uuliyadda culus ee loo igmaday. "Mad axweynaha Dorraad doorashadiisa nabadda ku dhacday iyo labada Madaxweyne ee gacanta isku dhiibay aad iyo aadbaan usoo dhoweyneynaa in Ilaahey idin barak eeyo oo sidaas ku wadaan waan idin kuugu soo duceyney naa,” ayuu markale yiri Madaxweyne Biixi.
Hadalkan ayaa ku soo aadayo, iyada oo dhowaan guddo omiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland uu bog gaadiyey dorashadii Afisyone, una hambalyeyey Xasan Sh.
Finland & Sweden Oo Si Rasmi U Codsaday Ku Biirista NATO Xili Lagala Horyimid Diidmo
Finland iyo Sweden ayaa si rasmi ah Shalay u codsaday inay xubno ka noqdaan gaashaanbuurta NATO, hase yeeshee waxay waj ahayaan diidmada dalka Turkey. Go’aanka Finland iyo Sweden oo dhex-dhexaad ka ahaa dagaalkii qaboobaa ay ugu biirayaan NATO, ayaa ah mid ka mid isbeddeladii ugu mu hiimsanaa ee ku yi maada naqshadda amni ee Yurub muddo tobanaan sano ah "Tani waa daqii qad taariikhi ah, oo ay tahay inaan ka faa’iideysano,” wa xaa sidaas yiri xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka had lay mun aasabad ay safiirada dalalkan ku gudbiyeen codsiga oo ka dhacday xarunta NATO ee Brussels.
"Waxaan si diiran usoo dhoweynayaa codsiyada Finland iyo Sw eden ay ugu biirayaan NATO. Waxaad tihiin saaxiibadeena ugu dhow, islamarkaana ku biiristiina NATO waxay kordhin doontaa am niga aan wadaagno,” ayuu yiri.
Si kastaba, labadan dal ayaa wajahaya bilo hubanti la’aan ah oo ay tahay inay ka guuleystaan iska caabinta ka dhanka ah codsigo oda, ayada oo ay qasab tahay in dhammaan 30-ka dal ee xubnaha ka ah NATO ay ogolaadaan.Turkey ayaa maalmihii dhowaa muuji say sida ay uga soo horjeedo xubinnimada Sweden iyo Finland, aya da oo sheegtay in labadan dal ay gabbaad siiyaan shakhsiyaad xiriir la leh urur argagixiso, ayna sidoo kale cunaqabateyn hub saareen Ankara kadib duulaankii ay ku qaaday Syria 2019.
Stoltenberg ayaa Shalay sheegay inuu rumeysan yahay in arrima han la xalin karo.
Duqa Muqdisho Oo La Kulmay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
Madaxweyne Xasan Sh.Maxamuud ayaa Shalay qaabi lay Gudd oomiyaha G/ Banaadir ahna Duqa mag alada Mu qdisho Cu mar Maxamuud Maxamed (Cu mar Filish).
Guddoomiyaha ayaa ugu horeyn Madaxweynaha ugu hamb aly eeyay guusha uu ka ga aray doorashadii dhowaan dhacday ee uu ka ga gu uleystay saaxiibkiis Maxamed C/hi Farm aajo, iyadoo ku lan ka diirada sidoo kale lagu saaray dar dar gelinta howlaha dowladda cusub Guddoomiya ha Gobolka Bana adir ayaa waxaa booqa shada ku wehliyay Xild hibaano, Agaasimay aal, Wasiirka Diinta iyo Awqaafta iyo Ugaas Max muud Cali Ugaas.
Si kastaba, Madaxweyne Xasan oo todobaadka soo socda xaf iiska la wareegayo ayaa tan iyo ma rkii la doortay wa xa uu waday kulamo kala duwan uu la yeelanayay dhinacyada Soo maalida iyo beesha caalamka, iyadoo kulamadaas in tooda badan diirada lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa cilaaq aadka dowladda & beesha caalamka oo hoos u dhac ay 5-tii sano uu xafiska jogay Farmaajo duqa muqdisho
OGAYSIISKA CALAAMADA GANACSIGA
OGAYSIIS WAXAA HALKAN LAGU BIXIYAY in summadda sare ee ganacsiga ay tahay hantida YUGA LABS, INC., A Delaware corporationof1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, United State iyo in calaamad isku mid ah loo isticmaalo alaabada soo socota:
Software-ka; Software-ka codsiga moobilka; Qalabka kombiyuutarka; Software-ka isku xirka bulshada iyo abuurista iyo la falgalka bulshooyinka khadka; Software-ka loogu talagalay abuurista, maaraynta iyo gelitaanka kooxaha ee bulshooyinka casriga ah; Qalabka horumarinta software; Software si uu awood ugu yeesho horumarinta, qiimaynta, tijaabinta, iyo dayactirka codsiyada software-ka mobaylka ee aaladaha isgaadhsiinta elegtarooniga ah ee la qaadan karo, kuwaas oo kala ah, mobilada, telefoonada gacanta, kombayutarada gacanta lagu qaato iyo tablets-yada kombayutarka; Software-ka loo istcimaali karo interface programming interface (API); Software-ka abaabulka dhacdooyinka, raadinta dhacdooyinka, jadwalaynta iyo maaraynta dhacdooyinka; Software-ka loogu talagalay abuurista, tafatirka, raritaanka, soo dejinta, gelitaanka, daawashada, dhajinta, soo bandhigida, ku dhejinta, blogging, baahinta, isku xidhka, sharraxaadda, muujinta dareenka, faallooyinka, la falgalka, ku dhejinta, iyo wadaagga ama haddii kale bixinta warbaahin elektaroonig ah, sawirro, muuqaal, maqal, muuqaal maqal iyo muuqaal ah, xogta, iyo macluumaadka iyada oo loo marayo internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Software-ka lagu raadinayo nuxurka iyo daabacayaasha, iyo ka-qaybgalka macluumaadka; Software-ka loogu talagalay abuurista iyo maaraynta muuqaallada warbaahinta bulshada iyo xisaabaadka isticmaalaha; Qalabka sawirka iyo fiidiyoowga ah ee isdhexgalka, kuwaas oo ah, dukaamada wax lagu duubo, lagu dhejiyo, lagu daabaco, laguna wadaago sawirada iyo muuqaalka dhijitaalka ah; Software-ka loogu talagalay baahinta maaweelada warbaahinta badan, waxyaabaha maqal-muuqaalka ah, waxa ku jira muuqaalka, iyo qoraalka iyo xogta la xidhiidha; Software-ka awood u siinaya gudbinta sawirada, maqalka, muuqaalka maqalka iyo macluumaadka iyo macluumaadka; Software-ka wax ka beddelka sawirrada, sawirrada iyo maqalka, muuqaalka, iyo waxa ku jira maqal-muuqaalka; Software-ka loo isticmaalo qaadista iyo tafatirka sawirada iyo duubista iyo tafatirka fiidyaha; Software-ka habaynta sawirada, garaafyada, maqalka, muqaalka, iyo qoraalka; Software-ka ururinta, maamulka, abaabulka, wax ka beddelka, gudbinta, isku-xidhka, iyo kaydinta xogta iyo macluumaadka; E-ganacsiga software; Software-ka E-commerce si loogu oggolaado dadka isticmaala inay sameeyaan macaamil ganacsi elektaroonig ah iyada oo loo marayo kombuyuutar caalami ah iyo shabakadaha isgaarsiinta; Software-ka iyo codsiga moobilka software bixiya goob suuq ah; Software-ka dirida iyo helitaanka farimaha elegtarooniga ah, digniinaha, ogeysiisyada iyo xasuusinta; Software-ka wadaaga faylka; Software-ka fariimaha; Software engine search; Software-ka loogu isticmaalo abuurista, maaraynta, cabbirka, iyo faafinta xayaysiinta kuwa kale; Seerfar xayaysiis, oo kala ah, server-ka kombuyuutarka ee kaydinta xayaysiisyada iyo gaarsiinta xayaysiisyada mareegaha; Software-ka abuurista, wadaaga, faafinta iyo soo dhejinta xayeysiinta; Software-ka loogu talagalay xayaysiisyada ku salaysan juqraafiga iyo horumarinta badeecada iyo adeegga; Software-ka awood u siinaya shakhsiyaadka, kooxaha, shirkadaha, iyo sumadaha si ay u abuuraan oo ay u ilaaliyaan joogitaan online ah oo ay ula falgalaan bulshooyinka internetka ujeedooyin suuqgeyn; Software-ka dhabta ah ee la soo dejin karo; Soo dejisan kara software xaqiiqada la kordhiyey; Soo dejisan kara software xaqiiqada isku dhafan; Software-ka dhabta ah ee madadaalada isdhexgalka iyo ciyaaraha dhabta ah ee dhabta ah; Software-ka dhabta ah ee la kordhiyey ee madadaalada is-dhexgalka ah iyo ciyaaraha dhabta ah ee la kordhiyay; Software-ka isku dhafka xogta elektaroonigga ah iyo jawiga adduunka dhabta ah ee ujeeddooyinka madadaalada, waxbarashada, ciyaaraha, isgaarsiinta, iyo isku xirka bulshada; Software-ka loo isticmaalo awood u siinta kombayutarada, ciyaaraha fiidyaha, consoles'ka ciyaarta fiidyaha ee gacanta lagu hayo, kombayuutarrada tablet-ka, aaladaha gacanta, iyo telefoonnada gacanta si loo bixiyo xaqiiqada dhabta ah iyo khibradaha dhabta ah ee la kordhiyey; Software-ka loogu talagalay ka shaqaynta, habaynta, iyo maaraynta madax-madaxeedyada iyo kontaroolayaasha xaqiiqada dhabta ah; Software-ka aqoonsiga tilmaanta, dabagalka shayga, kontoroolka dhaqdhaqaaqa, iyo muujinta nuxurka; Software-ka, firmware-ka iyo qalabka loo isticmaalo muuqaalka, codka, maqalka, dhaqdhaqaaqa, isha iyo ishaarada daba-galka iyo aqoonsiga; Software-ka lagu hagayo xaqiiqada dhabta ah iyo jawiga dhabta ah ee la kordhiyay; Software-ka awood u siinaya isticmaalayaasha inay la kulmaan xaqiiqada dhabta ah iyo kor u qaadida muuqaalka dhabta ah, khalkhalgelinta, iyo i dhexgalka; Software-ka loogu talagalay duubista, kaydinta, gudbinta, helitaanka, soo bandhigida iyo falanqaynta xogta qalabka kombiyuutarka ee xiran; Software-ka loo isticmaalo abuurista iyo naqshadaynta xaqiiqada dhabta ah iyo software-ka dhabta ah ee la kordhiyay; Interface Programming Interface (API) ee software-ka kombayutarka si loo horumariyo xaqiiqada dhabta ah iyo khibradaha dhabta ah ee la kordhiyay; Qalabka kombiyuutarka ee dhabta ah ee dhabta ah; Qalabka kumbuyuutarka ee ciyaarta dhabta ah ee la kordhiyay; Qalabka kombiyuutarka ee ciyaarta dhabta ah ee isku dhafan; Qalabka kombiyuutarka ee dhabta ah; Qalabka kombuyuutarka ee dhabta ah ee la kordhiyay; Qalabka kombiyuutarka ee dhabta ah ee isku dhafan; Dareemayaasha raadraaca dhaqdhaqaaqa ee xaqiiqada dhabta ah, xaqiiqada la kordhiyay iyo farsamada dhabta ah ee isku dhafan; Qalabka dhabta ah ee dhabta ah, oo kala ah, sameecadaha, muraayadaha, iyo kontaroolayaasha ka qayb qaadashada khibradaha dhabta ah ee dhabta ah iyo ciyaaraha dhabta ah ee dhabta ah; Qalabka dhabta ah ee la kordhiyey, kuwaas oo ah, sameecadaha, muraayadaha, iyo kontaroolayaasha ka qayb qaadashada khibradaha dhabta ah ee la kordhiyay iyo ciyaaraha dhabta ah ee la kordhiyay; Aaladaha xisaabinta ee la xidhi karo oo ka kooban kombuyuutar iyo shaashado muujinaya ku xidhidhiyaha kombayutarada, kombayutarada tablet-ka, aaladaha mobaylada, iyo moobilada si loo suurtogeliyo xaqiiqada dhabta ah iyo korodhka khibradaha aduunka; Hardware iyo software ee qalabka dareemayaasha ku shaqeeya; Aaladaha dareemaha elegtarooniga ah, kamaradaha, projectors-ka, iyo makarafoonada ee muujinta, wejiga, iyo ogaanshaha codka, qabashada iyo aqoonsiga; Qalabka iyo software-ka ee lagu ogaanayo walxaha, dhaqdhaqaaqyada isticmaalaha iyo amarada; Software-ka ciyaarta; Software-ka horumarinta ciyaaraha; Qalabka horumarinta software-ka ciyaaraha; Qalabka ciyaaraha ee Blockchain; Soo-dejin kara software-ka ciyaarta elegtarooniga ah ee dabeecadda ciyaaraha fiidyaha, ciyaaraha kombayutarka, ciyaaraha is-dhex-galka ah, ciyaaraha dhabta ah, la kordhiyay, iyo ciyaaraha dhabta ah; Software-ka kumbuyuutarka ee lagu xakameynayo hawlgalka aaladaha maqalka iyo muuqaalka; Soo-bandhigidda fiidiyowga; Software-ka loogu talagalay gelitaanka iyo daawashada qoraalka, sawirrada iyo xogta elektaroonigga ah ee la xidhiidha shirarka goobta horumarinta software; Software-ka loogu beddelayo luqadda dabiiciga ah amarrada mashiinka-fulin kara; Software-ka fududaynta isdhexgalka iyo xidhiidhka ka dhexeeya bini'aadamka iyo AI (sirta macmalka ah) aaladaha; Interface programming interface (API) si loogu isticmaalo horumarinta AI (sirdoonka macmalka ah) ee aaladaha, kuwaas oo kala ah, bots, wakiilada farsamada iyo caawiyayaasha farsamada; Software-ka, oo ah, is-dhexgal tarjumaad ah oo loogu talagalay fududaynta isdhexgalka u dhexeeya bini'aadamka iyo mishiinnada; Software-ka sirta macmalka ah, kuwaas oo ah, software barashada mashiinka, software aragga aragga, software aqoonsiga hadalka ama luqadda, software go'aan gaarista, software turjumaada, software aqoonsiga taabashada, software weydiinta, software loogu beddelo luqadda dabiiciga ah amarada mashiinka la fulin karo, iyo kaaliyaha dhijitaalka ah software; Software kaaliyaha dhabta ah kaas oo qaban kara hawlo ama adeegyo isagoo ka wakiil ah isticmaalaha kaas oo lagu hawl galiyay gelinta isticmaalaha, wacyigelinta goobta, iyo macluumaadka khadka; Software-ka bixinta macluumaadka macaamiisha; Software-ka bixinta maab elektaroonik ah; Software-ka goobta-ka warhaya raadinta, go'aaminta, iyo wadaaga goobaha; Software-ka raadinta iyo aqoonsiga fursadaha shaqada; Software-ka loogu talagalay aqoonsiga iyo u oggolaanshaha isticmaalayaasha inay la xiriiraan wakiilada dawladda; Software bixiya macluumaadka cimilada ee goobta ku salaysan; Bixinta, ku xidhidhiyaha, ama baahinta wararka ama macluumaadka dhacdooyinka taagan; Barnaamijka xakamaynta waalidka; Software-ka kombiyuutarka; Nidaamyada hawlgalka kumbuyuutarka; Software-ka awood u siinaya qalabka elektaroonigga ah inay wadaagaan xogta oo ay la xiriiraan midba midka kale; Qalabka kombuyuutarrada ku wareegsan; Agabka la xidhi karo ee kombuyuutarada, kombayuutarada tablet-ka ah, mobaylada iyo telefoonada gacanta; Aaladaha qulqulka warbaahinta dhijitaalka ah; Qalabka dhegaha la gashado; taleefoonnada gacanta; Madax-madaxeedka ciyaarta; Agabka ciyaaraha kombiyuutarka; Qalabka fiidiyooga, kuwaas oo ah, darawalada fiidiyooga ee muraayadaha indhaha; kamaradaha; baytariyada; Kiisaska batteriga; Baakadaha baytariyada; Qalab koronto oo dib loo dallaci karo, kuwaas oo kala ah, baytariyada dib loo dallaci karo iyo saadka korantada ee la qaadi karo; Dabaysha baytariyada; Xirmooyinka baytariga dibadda dib loo dallaci karo si loogu isticmaalo aaladaha elegtarooniga ah ee mobilada; Ku dallacaadda awoodda iyo agabka maaraynta tamarta ee aaladaha elegtarooniga ah ee mobilada; Dallacadu waxay u taagan tahay aaladaha elegtarooniga ah ee mobilada; Dabaysha dibadda ee loogu talagalay kombuyuutarrada, kombuyuutarrada tablet-ka ah, aaladaha gacanta iyo taleefannada gacanta; Kiis dallacaadda fiilo la'aanta ah ee loogu talagalay isticmaalka kombuyuutarrada, kombuyuutarrada tablet-ka, aaladaha gacanta iyo taleefannada gacanta; Adabiyeyaasha awoodda; Adabiyeyaasha korantada, fiilooyinka, iyo xirayaasha; Bacaha iyo kiisas si gaar ah loogu habeeyey aaladaha elegtarooniga ah ee mobilada; Daboolista ilaalinta iyo kiisaska aaladaha elegtarooniga ah ee mobilada; Kiisaska kombuyuutarrada, taleefannada casriga ah, taleefoonnada gacanta, sameecadaha iyo qalabka ciyaarta; Xirmooyinka, cududadaha, kiliishyada iyo kiisas sidda si gaar ah loogu habeeyey aaladaha elegtarooniga ah ee mobilada; Guryaha darbiyada ee lagu dhejiyo qalabka elektiroonigga ah ee mobilada; Waxay u taagan tahay aaladaha elegtarooniga ah ee mobilada; Kuwa haysta aaladaha elegtarooniga ah ee mobilada; Koontaroolada fog ee aaladaha elektiroonigga ah ee mobilada; Ku-hadlayaasha maqalka; Xadhkaha maqalka iyo hadalka korantada iyo isku xidhayaasha; Qaybaha fiilooyinka elegtarooniga ah iyo qalabyada; Xadhkaha elektarooniga ah; Fiilooyinka gudbinta ishaarada indhaha; Xadhkaha korontada iyo fiilooyinka; Makarafoonada; Qaadayaasha maqalka; Gudbiyeyaasha maqalka; Muuqaal muuqaal ah oo madaxa ku dhejisan; Qaatayaasha calaamadaha elegtarooniga ah; Qaadayaasha fiidiyowga; Gudbiyeyaasha wireless-ka iyo qaataha taranka dhawaaqa iyo calaamadaha; Dareemayaasha korantada; Dareemayaasha la socodka dhaqdhaqaaqa jirka; kaararka SIM; Software-ka loogu isticmaalo maareynta xiriirka macaamiisha (CRM); Software-ka fududaynta iyo diyaarinta maalgelinta iyo qaybinta lacag ururinta iyo deeqaha; Software-ka adeegyada lacag ururinta samafalka ee khadka tooska ah iyo adeegyada deeqaha maaliyadeed; Software-ka loogu isticmaalo fududaynta codadka borotokoolka internetka (VOIP), wicitaanada telefoonada, wicitaanada fiidyaha, fariimaha qoraalka, fariinta degdega ah iyo adeegyada shabakada bulshada ee internetka; Qalabka isgaarsiineed ee loogu talagalay bixinta cid saddexaad oo marin u helka, iyo awood u siinaya gudbinta muuqaalka, xogta iyo codka, shabakadaha isgaarsiinta caalamiga ah, kuwaas oo ah, mobilada iyo marinka komb ayuutarka iyo taleefoonnada gacanta, saldhigyada transceiver saldhigyada iyo qaybo ka mid ah raadiyaha wireless, gudbiyaasha xogta, soo celinta xogta. , router iyo furayaasha, wareegyada gudbinta, wareegyada isku dhafan, qalabka ko mbuyuutarka, macaamiisha daruuraha mobilada iyo adeegayaasha, multiplexers, soo-saareyaasha signalada dhijitaalka ah, soo-saareyaasha signalada soo noqnoqda raadiyaha, wareegyada wareejinta mobaylada, kontaroolayaasha kor antada hawada taraafikada, kontaroolayaasha korantada dhaqdhaqaaqa, gelitaanka kontaroolayaasha korantada, dekeda fog kontaroolayaasha korantada, dekedaha raadiyaha, anteenooyinka, qaybaha raadiyaha elektarooniga ah, software ee codsiyada isgaarsiinta, iyo shabakadaha xudunta u ah mobilada oo ka kooban transceivers xogta, shabakadaha wireless-ka iyo albaabada aruurinta, gudbinta iyo maamulka xogta, codka iyo muuqaalka; Software-ka isgaarsiinta iyo qalabka kombiyuutarka isgaarsiinta ee bixinta marinka internetka; Qalabka isgaarsiinta; Qaadayaasha idaacadaha iyo gudbiyaasha; Qaadayaasha GPS; Software si loogu oggolaado dadka isticmaala inay sameeyaan macaamil ganacsi e-commerce iyada oo loo marayo internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Software-ka isgaarsiinta; Software-ka u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay lacag-bixiyaan oo ay lacagaha u gudbiyaan; Software-ka awood u siinaya ist icmaaleyaasha khadka tooska ah inay lacag-bixiyaan oo ay ku wareejiyaan lacagaha mareegaha badan ee internetka iyo codsiyada moobiilka; Software ka habaynta lacag bixinta elegtarooniga ah; Software-ka habaynta macaamilka elect iroonigga ah; Software-ka kumbuyuutarka ee dabeecadda mashiinka weydiinta; Software-ka fududaynta barashada mashiinka; Software-ka loogu talagalay dhisidda is-dhexgalka isticmaalaha; Daabacadaha electaroonigga ah ee la soo dejisan karo; Software-ka ra'yi-ururinta; Software-ka u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay soo dhejiyaan su'aalaha leh xulashooyinka jawaabta; Qalabka sawirka iyo fiidiyoowga ah ee is-dhexgalka leh, kuw aas oo ah, qalabka kombuy uutarka ee dukaamada loogu talagalay soo-qaadista, dhejinta, tafatirka, daabacaadda iyo wadaaga sawirada dhijitaalka ah iyo fiidyaha; Software-ka isku-xidhka xogta ee u dhaxaysa rugta fog ama aaladda iyo saldhig ama qalab go'an ama fog; Amarka codka iyo software aqoonsiga, hadalka ku beddelka qoraalka software; Codsiyada kombuyuutar ee codka ku shaqeeya ee maaraynta macluumaadka shakhsiyeed; Automation-ka guriga iyo qalabka guriga; Software-ka isgaarsiinta wireless-ka ee codka, maqalka, muuqaalka, iyo gudbinta xogta; Software-ka loo isticmaalo in lagu xakameeyo macluumaadka la xakameeyey ee codku keligiis yahay iyo aaladaha caawiyaha gaar ka ah; Software-ka loogu talagalay aqoonsiga codka ee isticmaalka ee la xidhiidha gudbinta codka iyo xogta; Software-ka gelitaanka, baadhista, iyo raadinta xogaha online-ka ah, maqalka, muuqaalka, iyo waxyaabaha ku jira war-baahi nta badan, ciyaaraha, iyo barnaamijyada software-ka, iyo suuqyada codsiyada software; Software-ka loo isticmaalo in lagu xidho oo lagu xakameeyo internet-ka alaabta (iot) qalabka elegtarooniga ah; Software-ka Codsiga Kombiyuutar ka ee aaladaha wireless-ka ee gacanta lagu hayo, kuwaas oo ah, software loogu talagalay xakameynta, isku dhafka, shaqeynta, isku xirka, iyo maaraynta aaladaha macluumaadka ee codka lagu maamulo, kuwaas oo ah, aaladaha elektiroonigga ah ee bandhiga.. EEG BOGGA 4AAD
…KA YIMID BOGGA3AAD
caqliga leh ee macaamiisha ku xiran iyo codka lagu xakameeyo iyo qalabka elektiroonigga ah ee kaaliyaha gaarka ah; Software-ka habaynta, dib-u-soo-saarka, isku-xidhka, duubista, habaynta, soo dejinta, soo-dejinta, gudbinta, baahinta, helitaanka, ciyaarta iyo daawashada qoraalka, warbaahinta badan iyo faylasha xogta; Software-ka, loogu talagalay barnaamijyada telefishinka is-dhex-galka ah, ee gaarka loo leeyahay (TV) looguna isticmaalo soo bandhigida iyo maamulida warbaahinta muuqaalka, sawirada garaafyada, qoraalka, sawirada, sawirada, animation dhijitaalka ah, cajalado fiidiyoow ah, muuqaal filim iyo xog maqal; Software-ka ah nooca codsiga moobilka ee adeegyada isgaarsiinta ee bixinta gudbinta codka, xogta, muuqaalka, iyo macluumaadka ku jira intarneedka iyo shabakada caalamiga ah ee kombiyuutarada ama aaladaha kale ee elektiroonigga ah ee macaamiisha la qaadan karo; Software-ka raadinta hagaha sahaminta madadaalada ee telefishanka; Software-ka raadinta, helista, ururinta, tusmaynta, isku xidhka, hagidda, helida, soo dejinta, helitaanka, codaynta, dejinta, ciyaarta, kaydinta iyo habaynta qoraalka, xogta, sawirada, garaafyada, maqalka iyo muuqaalka shabakada kombayutarka caalamiga ah; Software si kor loogu qaado gelitaanka moobaylka ee internetka iyada oo loo marayo kombiyuutarada, kombuyuutarrada gacanta, iyo qalabka isgaarsiinta moobiilka; Software-ka qaabaynta iyo beddelka tusmada, qoraalka, shaqooyinka muuqaalka, shaqooyinka maqalka, shaqooyinka maqal-muuqaalka, shaqooyinka suugaanta, xogta, faylalka, dukumentiyada iyo shaqooyinka elektaroonigga ah ee loo samaynayo qaab ku habboon aaladaha kombayutarada iyo kombayutarada la qaadi karo; Software-ka gudbinta, wadaaga, helitaanka, soo dejinta, soo bandhigida, la falgalka iyo wareejinta nuxurka, qoraalka, shaqooyinka muuqaalka, shaqooyinka maqalka shaqooyinka maqal-muuqaalka ah, shaqooyinka suugaanta, xogta, faylasha, dukumentiyada iyo shaqooyinka elektarooniga ah; Qalabka isgaarsiinta ee elegtarooniga ah iyo aaladaha, kuwaas oo ah, moobilka iyo aaladaha eletrooniga ah ee dhijitaalka ah ee la xidhan karo ee dirida iyo helitaanka qoraalka, xogta, maqalka, sawirka, iyo galalka muuqaalka; Qalabka isgaarsiinta iyo aaladaha, kuwaas oo ah kuwa ku hadla iyo makarafoonada lagu iibiyo sifooyin ka kooban kombiyuutarada, mobilada iyo aaladaha elegtarooniga ah ee dhijitaalka ah ee la xiran karo ee dirida iyo helida taleefoonada, fariimaha qoraalka, boostada elektarooniga ah, iyo xogta kale ee dhijitaalka ah, iyo isticmaalka bixinta marin u helka internet ah; Qoraalada elektarooniga ah; Abaabulayaasha elegtarooniga ah ee shakhsi ahaaneed; Qalab lagu duubo codka elegtarooniga ah iyo codka aqoonsiga; Qalabka elektaroonigga ah ee la qaadi karo ee duubista, abaabulka, gudbinta, wax-ka-beddelka, dib u eegista, iyo helitaanka qoraalka, xogta, iyo faylasha dhijitaalka ah; Qalab kombuyuutar oo la xidhan karo; Aaladaha elegtarooniga ah ee la xidhan karo oo ka kooban software-ka digniinaha, fariimaha, iimaylada, iyo xasuusinta, iyo duubista, habaynta, gudbinta, wax-ka-beddelka, dib u eegista, iyo helitaanka qoraalka, xogta, maqalka, sawirka iyo faylalka dhijitaalka ah iyo shaashadaha bandhiga; Software-ka gelitaanka, baadhista iyo raadinta xogaha internetka; Software-ka gelitaanka, la socodka, raadinta, soo bandhigida, akhrinta, talada, wadaaga, abaabulka, iyo ka warhaynta wararka, ciyaaraha, cimilada, faallooyinka, iyo macluumaadka kale, waxa ku jira wargeysyada xilliyada, baloogyada, iyo mareegaha, iyo qoraallo kale, xog, garaafyo, sawirro , maqal, muuqaal, iyo nuxurka warbaahinta badan; Software-ka loogu talagalay abuurista, qorista, qaybinta, soo dejinta, gudbinta, helida, ciyaarida, tafatirka, soo saarida, codaynta, dejinta, muujinta, kaydinta iyo habaynta qoraalka, xogta, garaafyada, sawirada, maqalka, muqaalka, iyo nuxurka warbaahinta badan, daabacaadyada elegtarooniga ah, iyo elegtarooniga ah ciyaaraha; Qalabka duubista, gudbinta ama taranka codka ama sawirada; Qalabka gudbinta isgaarsiinta; Qalabka lagu kaydiyo xogta, kuwaas oo ah, moobilka iyo qalabka elegtarooniga ah ee dhijitaalka ah ee la xidhan karo ee kaydinta qoraalka, xogta, maqalka, sawirka, iyo galalka fiidyaha; Blockchain; Blockchain software; Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency'; Software-ka Cryptography; Software-ka macdanta cryptocurrency; Software-ka beeraha cryptocurrency; Software-ka goobta blockchain; Software-ka loo isticmaalo cryptocurrency; Software-ka loo isticmaalo lacagta dhijitaalka ah; Software-ka loogu talagalay isticmaalka lacagta farsamada; Jeebka lacagta dhijitaalka ah iyo adeegyada kaydinta software; Software-ka loo isticmaalo sidii boorsada cryptocurrency; Jeebka qalabka Cryptocurrency; Kombuyuutar la soo dejin karo oo loo isticmaalo sidii boorsada dhijitaalka ah; Kombuyuutar la soo dejin karo oo loo isticmaalo sidii boorsada elektarooniga ah; Barnaamijyada kombuyuutarrada iyo barnaamijyada kombuyuutarka codsiga ee kaydinta xogta elektaroonigga ah; Software-ka bixinta boorsada dhijitaalka ah; Software-ka loogu talagalay bixinta lacagta dhijitaalka ah iyo wax kala beddelashada; Software-ka loo isticmaalo maaraynta faylalka lacagaha dhijitaalka ah, lacagta farsamada, cryptocurrency, digital iyo blockchain hantida, hantida digitized, calaamooyinka dhijitaalka ah, crypto calaamooyinka iyo utility; Software-ka loo isticmaalo sidii boorsada elektarooniga ah; Software-ka loogu talagalay abuurista iyo maaraynta boorsooyinka elektaroonigga ah Software-ka adeegyada jeebka elegtarooniga ah; Jeebabka elektaroonigga ah ee la soo dejisan karo; Software-ka buug-gacmeedka la qaybiyay; Software madal ledgeer qaybsan; Software-ka loo isticmaalo tignoolajiyada ledgerka qaybsan; Software-ka fududeeya awoodda isticmaalayaasha si ay u eegaan, u falanqeeyaan, u duubaan, u kaydiyaan, ula socdaan, maareeyaan, ganacsiga iyo sarrifka lacagaha dhijitaalka ah, lacagta farsamada, cryptocurrency, digital iyo blockchain hantida, hantida digitized, calaamadaha dhijitaalka ah, crypto tokens iyo utility tokens; Software-ka dirista, helitaanka, aqbalida, gadashada, iibinta, kaydinta, gudbinta, ganacsiga iyo isdhaafsiga lacagta dhijitaalka ah, lacagta farsamada, cryptocurrency, digital iyo blockchain hantida, hantida digitized, calaamadaha dhijitaalka ah, crypto tokens iyo utility tokens; Software-ka fulinta iyo duubista dhaqdhaqaaqa maaliyadeed; Software-ka buug-yaraha oo la qaybiyay si loogu isticmaalo hab-socodka macaamilka maaliyadeed; Software-ka abuurista xisaabaadka iyo ilaalinta iyo maaraynta macluumaadka ku saabsan dhaq-dhaqaaqa maaliyadeed ee xisaabaadka la qaybiyay iyo shabakadaha lacag-bixinta ee asxaabta; Software-ka loo isticmaalo ganacsiga maaliyadeed; Software-ka loo isticmaalo sarrifka lacageed; Software-ka helitaanka macluumaadka maaliyadeed iyo xogta suuqa iyo isbeddellada; Software-ka bixinta aqoonsiga dhinacyada macaamil ganacsi lacageed; Software-ka loogu talagalay ilaalinta ledgerada dhaqdhaqaaqa maaliyadeed; Software-ka loogu talagalay maaraynta amniga cryptographic ee gudbinta elektiroonigga ah ee shabakadaha kombiyuutarada; Software-ka sirta iyo awood u siinaya gudbinta sugan ee macluumaadka dhijitaalka ah ee internetka; Software-ka loogu oggolaado isticmaaleyaasha inay xisaabiyaan cabbirrada la xiriira macaamilka maaliyadeed; xaaladda maqal-muuqaalka ah, xaaladda suugaanta, xogta, faylasha, xogta iyo xaaladaha elektarooniga ah; Qalabka ee elegtarooniga ah iyo aaladaha, kuwaas oo ah, moobilka iyo aaladaha eletrooniga ah ee dhijitaalka ah ee la xidhay karo ee dirida iyo helitaanka qoraalka, xogta, maqalka, sawirka, iyo galalka muuqaalka; Qalabka iyo aaladaha, kuwaas oo ah kuwa ku hadla iyo makarafoonada lagu xiray sifooyin ka kooban koboca, mobilada iyo aaladaha elegtarooniga ah ee dhijitaalka ah ee la xiran karo ee dirista iyo helida taleefoonada, fariimaha qoraalka, boostada elektarooniga ah, iyo xogta kale ee dhijitaalka ah ah, iyo mamnuuc marin u helka internet ah; Qoraalada elektarooniga ah; Abaabulayaasha elegtarooniga ah ee xayeysiiska; Qalab lagu duubo codka elegtarooniga ah iyo codka codka; Qalabka elektaroonigga ah ee la qaadi karo ee duubista, abaabulka, gudbinta, wax-ka-beddelka, dib u reviews, iyo helitaanka qoraalka, xogta, iyo faylasha dhijitaalka ah; Qalab kombuyuutar oo la xidhay karo; Aalaadaha elegtarooniga ah ee lagu xidhay karo oo ka kooban software-ka digniinaha, fariimaha, iimaylada, iyo xasuusinta, iyo duubista, habaynta, gudbinta, wax-ka-beddelka, dib u reviews, iyo helitaanka qoraalka, xogta, maqalka, sawirka iyo faylalka dhijitaalka ah iyo muujinaha bandhiga; Software-ka gelitaanka, baadhista iyo raadinta xogta goobta; Software-ka gelitaanka, la socodka, raadinta, soo bandhigida, akhrinta, talada, wadaaga, abaabulka, iyo ka warhaynta wararka, ciyaaraha, cimilada, faallooyinka, iyo xogta kale, waxa ku jira wargeysyada xilliyada, baloogyada, iyo mareegta, iyo qoraallo kale , xog, garaafyo, sawirro , maqal, muuqaal, iyo nuxurka warbaahinta badan; Software-ka loogu talagalay abuurista, qorista, qaybinta, soo gudbinta, gudbinta, helida, ciyaarida, tafatirka, soo saarida, codaynta, keenista, qaybinta, kaydinta iyo habaynta qoraalka, xogta, garaafyada, sawirada, maqalka, muqaalka, iyo nuxurka warbaahinta badan , daabacaadyada elegtarooniga ah, iyo elegtarooniga ah ciyaaraha; Qalabka duubista, gudbinta ama taranka codka ama sawirada; Qalabka gudbinta; Qalabka lagu kaydiyo xogta, kuwaas oo ah, moobilka iyo agabka elegtarooniga ah ee dhijitaalka ah ee la xidhay karo ee kaydinta qoraalka, xogta, maqalka, sawirka, iyo galalka fiidyaha; Blockchain; Blockchain software; Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency'; Software-ka Cryptography; Software-ka cryptocurrency; Software-ka beeraha cryptocurrency; Software-ka goobta blockchain; Software-ka loo isticmaalo cryptocurrency; Software-ka loo isticmaalo lacagta dhijitaalka ah; Software-ka loogu talagalay isticmaalka lacagta farsamada; Jeebka lacagta dhijitaalka ah iyo shaqada kaydinta software; Software-ka loo isticmaalo sidii boorsada cryptocurrency; Jeebka lacagta Crypto; Kombuyuutar la soo dejin karo oo loo isticmaalo sidii boorsada dhijitaalka ah; Kombuyuutar la soo dejin karo oo loo isticmaalo sidii boorsada elektarooniga ah; Barnaamijyada kombuyuutarrada iyo baahida kombuyuutarka ee kaydinta xogta elektaroonigga ah; Software-ka cabashada boorsada dhijitaalka ah; Software-ka loogu talagalay keydka lacagaha dhijitaalka ah iyo wax kala beddelashada; Software-ka loo isticmaalo maaraynta faylalka lacagaha dhijitaalka ah, farsamada, cryptocurrency, digital iyo blockchain alaabta, alaabta digitized, calaamooyinka dhijitaalka ah, crypto calaamooyinka iyo utility; Software-ka loo isticmaalo sidii boorsada elektarooniga ah; Software-ka loogu talagalay abuurista iyo maaraynta boorsooyinka elektaroonigga ah Software-ka shaqada jeebka elegtarooniga ah; Jeebabka elektaroonigga ah ee la soo dejisan karo; Software-ka buug-gacmeedka la qaybiyay; Software madal ledgeer qaybsan; Software-ka loo isticmaalo tignoolajiyada ledgerka qaybsan; Software-ka fududeeya isticmaalayaasha si ay u eegaan, u falanqeeyaan, u duubaan, u kaydiyaan, ula socdaan, maareynayaan, suuqyada iyo alaabada dhijitaalka ah, lacagta farsamada, cryptocurrency, digital iyo blockchain alaabta, alaabta digitized, calaamadaha dhijitaalka ah, crypto calaamadaha iyo calaamadaha utility; Software-ka dirista, helitaanka, aqbalida, gadaashada, iibinta, kaydinta, gudbinta, ganacsiga iyo isdhaafsiga lacagta dhijitaalka ah, lacagta farsamada, cryptocurrency, digital iyo blockchain alaabta, alaabta digitized, calaamadaha dhijitaalka ah, crypto tokens iyo utility tokens; Software-ka iyo duubista dhaqdhaqaaqa; Software-ka buug-yaraha oo la qaybiyay si loogu isticmaalo hab- safka gaadiidka gaadiidka; Software-ka abuurista xisaabaadka iyo ilaalinta iyo maaraynta xogta ku saabsan dhaq-dhaqaaqa xisaabaadka la qaybiyay iyo shabakada lacag-bixinta ee asxaabta; Software-ka loo isticmaalo gaadiidka; Software-ka loo isticmaalo maktabad; Software-ka helitaanka xogta iyo xogta suuqa iyo isbeddellada; Software-ka aqoonsiga ganacsi ganacsi ganacsi; Software-ka loogu talagalay ilaalinta ledgerada dhaqdhaqaaqa; Software-ka loogu talagalay maaraynta amniga cryptographic ee gudbinta elektiroonigga ah ee shabakadaha kookaha; Software-ka sirta awood iyo u siinaya gudbinta sugan ee xogta dhijitaalka ah ee website-ka; Software-ka loogu oggolaado isticmaalka xisaabaadka cabbirrada la xidhiidha iibka goob; Software-ka aqoonsiga la soo dajin karo ee lagu xakameynayo gelitaanka iyo isgaarsiinta kombiyuutarada iyo shabakadaha kombuyuutarka; Kaararka deynta iyo kaadhadhka lacag-bixinta oo si magnetic ahaan loo sudhay; Qalabka sirta ah; Calaamadaha amniga; Software-ka loo isticmaalo calaamad ahaan; Software loo isticmaalo soo saarista lacagta dhijitaalka ah, lacagta farsamada, cryptocurrency, digital iyo blockchain hantida, hantida digitized, calaamadaha dhijitaalka ah, crypto tokens iyo utility tokens; Calaamadaha Crypto iyo calaamadaha utility; Software loo isticmaalo xisaabinta lacagta dhijitaalka ah, lacagta farsamada, cryptocurrency, digital iyo blockchain hantida, hantida digitized, calaamadaha dhijitaalka ah, crypto tokens iyo utility tokens; Adeegga Xayeysiiska, oo kala ah, server-ka kombuyuutarka ee kaydinta xayaysiisyada iyo gaarsiinta xayaysiisyada mareegaha; Altimeters; Interface Programming Interface (API) ee software-ka kombuyuutarka ee horumarinta iyo abuurista xaqiiqada dhabta ah, xaqiiqada la kordhiyay iyo khibradaha dhabta ah ee isku dhafan; Interface Programming Interface (API) ee software-ka kombayutarka kaas oo u fududeeya adeegyada khadka ee xidhiidhka bulshada iyo dib u soo celinta xogta, soo dejinta, soo dejinta, gelitaanka iyo maamulka; Interface Programming Interface (API) ee software-ka u fududeeya adeegyada khadka ee xidhiidhka bulshada iyo soo celinta xogta, raritaanka, soo dejinta, gelitaanka iyo maamulka; Interface programming interface (API) si loogu isticmaalo dhisidda codsiyada software; Muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyey; Dheeciyeyaasha dhabta ah ee la kordhiyey; Software-ka dhabta ah ee la kordhiyay; Software-ka dhabta ah ee la kordhiyay ee madadaalada isdhexgalka; Software-ka dhabta ah ee la kordhiyey ee lagu hagayo jawiga dhabta ah ee la kordhiyey; Software-ka dhabta ah ee la kordhiyey ee dabagalka shayga, xakamaynta dhaqdhaqaaqa iyo muujinta nuxurka; Software-ka dhabta ah ee la kordhiyey ee loogu talagalay ku shaqaynta madax-madaxeedyada dhabta ah ee la kordhiyey; Software-ka dhabta ah ee la kordhiyey ee isticmaalayaashu si ay ula kulmaan muuqaal-ururinta dhabta ah ee la kordhiyey, wax-is-daba-marinta iyo dhex-gelinta; Fiilooyinka, kuwaas oo ah, fiilooyinka elektarooniga ah iyo fiilooyinka isku xirka; Kiisaska, xarkaha, cududda gacanta iyo xidhmooyinka cududda ee aaladaha la socodka elektiroonigga ah; Codsiga kombuyuutarka ee taleefannada casriga ah iyo aaladaha moobaylka ee dhinacyada jimicsiga iyo jimicsiga oo muujinaya adeegyada tababarka shaqsiyeed, tababarida, jimicsiga iyo qiimaynta jirdhiska; Software-ka codsiga kombuyuutarka ee loo isticmaalo habaynta iyo xakamaynta qalabka kombuyuutarka ee la xidhan karo iyo qalabka kombayuutarka ee la xidhan karo; Qalab kombuyuutar oo loogu talagalay soo bandhigida xogta iyo fiidiyowga; Qalab kombuyuutar oo loogu talagalay in lagu cabbiro garaaca wadnaha; Qalab kombuyuutar ah oo loogu talagalay qaadashada electrocardiograms; Software-ka nidaamka hawlgalka kombiyuutarka; Qalabka kombuyuutarka ee loo isticmaalo saacadaha smartwatches, kuwaas oo ah, bandsyada smartwatch iyo xargaha smartwatch; Qalabka kombuyuutarka ee soo bandhigaya xogta iyo fiidiyowga; Qalabka kombuyuutarka ee aaladaha mobilada ee lagu soo bandhigo xogta iyo fiidiyowga, kuwaas oo ah, meelaha madaxa lagu xidho aaladaha mobilada ee lagu soo bandhigo xogta iyo fiidiyowga; Qalabka kombayuutarka ee aaladaha mobilada ee meel fog laga galo iyo gudbinta xogta, kuwaas oo ah, meelaha madaxa loogu xidho aaladaha mobilada ee fogaynta iyo gudbinta xogta; Qalabka kombuyuutarka ee aaladaha mobilada, kuwaas oo ah, aaladaha elektiroonigga ah, kormeerayaasha, dareemayaasha, iyo bandhigyada dareenka, la socodka, duubista, soo bandhigida cabbirka, iyo gudbinta meelaynta caalamiga ah, jihada, fogaanta, joogga, xawaaraha, macluumaadka marinka, macluumaadka cimilada, heerkulka, jidhka heerka dhaqdhaqaaqa, garaaca wadnaha, garaaca garaaca wadnaha, cadaadiska dhiigga, kaloriyada gubtay, tillaabooyinka la qaaday, iyo xogta biometric; Qalabka kombuyuutarka ee meel fog laga galo iyo gudbinta xogta; Software-ka kumbuyuutarka iyo software-ka kumbuyuutarka ee taleefannada gacanta iyo aaladaha dhijitaalka ah ee gaarka ah ee bixiya qiimeynta jir dhiska iyo dhibcaha jirdhiska iyadoo la isbarbar dhigayo qaab ciyaareedkii hore ee ciyaaraha fudud iyo heerarka jirdhiska iyo bandhigyada ciyaaraha fudud ee mustaqbalka iyo heerarka jirdhiska, oo bixiya talo iyo jimicsiyo habaysan si loo horumariyo meelaha gaarka ah ciyaaraha gaarka ah ama dhaqdhaqaaqa jirdhiska; Software-ka kumbuyuutarka iyo software-ka kumbuyuutarka ee taleefannada gacanta iyo aaladaha dhijitaalka ah ee gaarka ah ee kormeera, daba-socda, oo barbar dhigaya dhaqdhaqaaqa ciyaaraha iyo heerka jirdhiska; Software-ka kumbuyuutarka iyo software-ka kumbuyuutarka ee taleefannada gacanta iyo aaladaha dhijitaalka ah ee gaarka ah ee qiimeeya heerka jirdhiska isticmaalaha iyo ciyaaraha fudud, oo bixiya buundooyinka jirdhiska; Software-ka kumbuyuutarka iyo software-ka kumbuyuutarka ee taleefannada gacanta iyo aaladaha dhijitaalka ah ee gaarka ah ee bixiya talooyinka, tababarka, iyo jimicsiga la shaqsiyeeyay, si loo horumariyo dhibcaha jirdhiska ee isticmaalaha; Software-ka kumbuyuutarka iyo software-ka kumbuyuutarka ee taleefannada gacanta iyo aaladaha dhijitaalka ah ee gaarka ah ee lagula xiriiro consoles-yada ciyaaraha, kombayutarada gaarka ah, aaladaha dhijitaalka ah ee gaarka ah, iyo taleefannada gacanta, ee ku saabsan waqtiga, xawaaraha, xawaaraha, tillaabooyinka la qaaday, xirfadda ciyaaraha, kalooriyada gubtay, firfircoonida, dhaqdhaqaaqa, isku dheelitirnaanta, iskudubarid, iyo dabacsanaan; Software-ka kumbuyuutarka iyo software-ka kumbuyuutarka ee taleefannada gacanta iyo aaladaha dhijitaalka ah ee gaarka ah ee la socodka, raritaanka, iyo soo dejinta xogta ku saabsan dhaqdhaqaaqa isboortiga, tababarka jirdhiska, iyo heerka jir dhiska ee internetka iyo shabakadaha kale ee kombuyuutarka iyo elektiroonigga ah; Software-ka kumbuyuutarka iyo software-ka kombuyuutarka ee ogaanaya dhaqdhaqaaqa isticmaalaha inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jirka, fadhiyada jimicsiga, jimicsiga, si loo bixiyo buundooyinka jirdhiska shakhsi ahaaneed iyo qiimeynta; Kombuyuutar software iyo firmware, kuwaas oo ah, barnaamijyada nidaamka hawlgalka, software isku-darka xogta, iyo barnaamijyada isku xidhka xogta; Qalabka horumarinta software-ka kombiyuutarka; Software-ka kumbuyuutarka ee gelitaanka, baadhista iyo raadinta xogaha internetka; Software-ka kombuyuutarka ee gelitaanka, la socodka, raadinta, soo bandhigida, akhrinta, talada, wadaaga, abaabulka, iyo ka warhaynta wararka, ciyaaraha, cimilada, faallooyinka, iyo macluumaadka kale, waxa ku jira joornaaliiste, blogs, iyo mareegaha, iyo qoraallo kale, xog, garaafyo, sawiro, maqal, muuqaal, iyo nuxurka warbaahinta badan; Software-ka kombuyuutarka ee lagula xidhiidho consoles-yada ciyaaraha ee ku saabsan wakhtiga, xawaaraha, xawaaraha, tillaabooyinka la qaaday, xirfada ciyaaraha fudud, kalooriyada gubtay, firfircoonida, dhaqdhaqaaqa, dheelitirnaanta, isu-duwidda, iyo dabacsanaanta; Software-ka kombuyuutarka ee abuurista, qorista, qaybinta, soo dejinta, gudbinta, helida, ciyaarta, tafatirka, soo saarida, codaynta, dejinta, muujinta, kaydinta iyo habaynta qoraalka, xogta, garaafyada, sawirada, maqalka, muqaalka, iyo nuxurka warbaahinta badan, iyo daabacaadyada elektarooniga ah iyo ciyaaraha elektarooniga ah; Software-ka kombuyuutarka loogu talagalay abuurista, tafatirka, soo dejinta, soo dejinta, gelitaanka, daawashada, dhajinta, soo bandhigida, ku dhejinta, blogging, baahinta, isku xidhka, sheegidda, muujinta dareenka, ka faallooda, dhejinta, gudbinta, iyo wadaagista ama haddii kale bixinta warbaahinta elektaroonigga ah ama macluumaadka iyada oo loo marayo kombiyuutarka internetka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Software-ka kumbuyuutarka ee abuuritaanka, maamulka, iyo la falgalka bulshada khadka ah; Software-ka kumbuyuutarka ee maaraynta jirdhiska iyo miisaanka; Software-ka kumbuyuutarka ee jimicsiga, qiimeynta jirdhiska, iyo hawlaha isboortiga; Software-ka kumbuyuutarka ee isku dhafka xogta elektaroonigga ah iyo jawiga dhabta ah ee adduunka ujeeddooyinka madadaalada, isgaarsiinta, iyo isku xirka bulshada; Software-ka kumbuyuutarka ee lagu maareeyo macluumaadka ku saabsan dabagalka, u hoggaansanaanta iyo dhiirigelinta barnaamijka caafimaadka iyo jimicsiga; Software-ka kombuyuutarka ee loogu talagalay wax ka beddelka iyo awood-siinta gudbinta sawirrada, maqalka, maqalka iyo muuqaalka iyo macluumaadka iyo macluumaadka; Software-ka kombuyuutarka ee loogu talagalay wax ka beddelka sawirrada, sawirrada iyo maqalka, muuqaalka, iyo maqal-muuqaalka waxyaabaha ku jira filtarrada sawirka iyo xaqiiqada dhabta ah, xaqiiqada isku dhafan iyo saamaynta xaqiiqada la kordhiyey, kuwaas oo kala ah, garaafyada, animations, qoraal, sawirro, geotags, tags metadata, hyperlinks ; Software-ka kombiyuutarka ee la socodka, habaynta, soo bandhigida, kaydinta iyo gudbinta xogta la xidhiidha dhaqdhaqaaqa jidhka ee isticmaalaha; Software-ka kombuyuutarka ee habaynta sawirada, garaafyada, maqalka, muuqaalka, iyo qoraalka; Software-ka kombuyuutarka ee dirida iyo helida fariimaha elegtarooniga ah, garaafyada, sawirada, maqalka iyo maqalka waxa ku jira kombayutarka intarneedka iyo shabakadaha isgaarsiinta; Software-ka kumbuyuutarka ee dirida iyo helitaanka farimaha elegtarooniga ah, ogeysiisyada, ogeysiinta iyo xasuusinta; Software-ka kombuyuutarka ee dareenka, la socodka, duubista, muujinta, cabbirka, iyo gudbinta meelaynta caalamiga ah, jihada, fogaanta, joogga, xawaaraha, macluumaadka marinka, macluumaadka cimilada, heerkulka, heerka dhaqdhaqaaqa jidhka, garaaca wadnaha, garaaca wadnaha, cadaadiska dhiigga, kaloriyada gubtay, tillaabooyinka la qaaday, iyo xogta biometric; Software-ka kumbuyuutarka ee dejinta, habaynta, ka shaqaynta iyo xakamaynta aaladaha mobaylada, aaladaha la xidhi karo, talefannada gacanta, kombayutarada, iyo agabka kombayutarka; Software-ka kumbuyuutarka ee isku xirka bulshada iyo la falgalka bulshooyinka khadka; Software-ka kombuyuutarka ee ururinta, maamulka, habeynta, habeynta, wax ka beddelka, gudbinta, wadaagga, iyo kaydinta xogta iyo macluumaadka; Software-ka kombuyuutarka ee wareejinta fariimaha, iimaylka internetka, iyo/ama xogta kale ee hal ama in ka badan oo ah qalabka isgaadhsiinta ee wireless-ka ee la xidhan
karo ee laga helo kaydka xogta ee saaran ama ku xidhan kombayutarka gaarka ah ama serfarka; Software-ka kumbuyuutarka ee dabagalka iyo maareynta macluumaadka ku saabsan caafimaadka.. ,..EEG BOGGA 5AAD
KA YMID BOGGA4AAD
, fayoqabka, iyo barnaamijyada fayoqabka; Software-ka kombuyuutarka ee loo istcimaali karo interface programming interface (API); Software-ka kumbuyuutarka ee loogu isticmaalo abuurista, maaraynta, cabbirka, iyo faafinta xayaysiin